Hilux Revo – Safety | Toyota Myanmar – Together Tomorrow Toyota
Hilux Revo – Safety
High-tensile Steel Sheeting
HILUX REVO တွင် SRS ယာဉ်မောင်းလေအိတ်၊ SRS အရှေ့ဘက်စီးနင်းသူလေ
အိတ်၊ SRS ဒူးလေအိတ် (ယာဉ်မောင်း၏ထိုင်ခုံ) (All grades)၊
SRS ဘေးဘက်လေအိတ်များ (အရှေ့ဘက်ထိုင်ခုံများ) နှင့် SRS ဘေးကာလေအိတ် (အရှေ့နှင့်အနောက် ထိုင်ခုံများ) (Double cab & Extra Cab)
Toyota ၏ ဆန်းသစ်သော GOA ဒီဇိုင်းကို အခြေခံကာ HILUX REVO ၏ ကိုယ်ထည်ကို ခိုင်ခန့်မာကျောအောင်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ယာဉ်တိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်သည့်အခါ ခရီးသည်များအားထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ခံနိုင်ရည်စွမ်းအား မြင့်မားသည့် သံမဏိကို အသုံးပြုကာ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
ကား၏ကိုယ်ထည်မှာပေါ့ပါးကျစ်လစ်မှုရှိခြင်းနှင့်အတူကားကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများကို တပ်ဆင်ရာတွင်ပိုမိုအားဖြည့် လုပ်ဆောင်ထားပြီး spot welding ကိုလည်း
ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် အသုံးပြုထားပါသည်။
ကားနောက်ခန်း အလယ်ထိုင်ခုံအပါအဝင် ကားအတွင်းရှိ ထိုင်ခုံများအားလုံးကို
3-point ELRထိုင်ခုံခါးပတ်များ တပ်ဆင်ထားပါသည်။
CRS top tether anchor
ကားနောက်ခန်းထိုင်ခုံတွင် ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံတပ်ဆင်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားပါသည်။
အကူအညီများသည် ထောင့်ချိုးကိုကွေ့ရာတွင် ဦးတည်ချက်ကို ထိန်းထားနိုင်စေရန်
အတွက် ဘီးတစ်ဘီးချင်းစီထံသို့ အင်ဂျင်စွမ်းအင်နှင့် ဘရိတ်နင်းသည့်အားတို့ကို အလို
အလျောက် ချိန်ညှိခြင်း၊ ကျဉ်းမြောင်းသည့်ကွေ့ သို့မဟုတ် စိုနေသည့်မျက်နှာပြင်၌ပင်
လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှိနေစေခြင်းဖြင့် မော်တော်ယာဉ်မှာ ၎င်း၏ဦးတည်ရာကို ထိန်းထားကြောင်း သေချာစေပါသည်။ (Double Cab & Extra Cab)
ကုန်များနေခြင်း၊ ဘေးတိုက်လေများ သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသည့် လမ်းအခြေအနေများကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ယိမ်းခါနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင် ထရေလာလွှဲယမ်းခြင်းထိန်းချုပ်မှု (TSC) ၏ အာရုံခံကိရိယာသည် ထရောလာလွှဲယမ်းမှုကို ချုံ့ရန်နှင့် မော်တော်ယာဉ်၏တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ဘရိတ်နင်းခြင်းဖိအားနှင့် စွမ်းအင်အထွက်ကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပေးပါသည် (Double Cab & Extra Cab)
LED ရှေ့မီးကြီးများနှင့် နှင်းခွဲမီးများ
LED ရှေ့မီးကြီးများ (G Grade) နှင့် LED နှင်းခွဲမီးများ (G Grade Premium)သည်
မြင်နိုင် စွမ်းအား ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
အရေးပေါ်ဘရိတ်နင်းသည့် အချက်ပြမှုသည် နောက်မှလိုက်လာသည့်မောင်းနှင်သူများအား အရေးပေါ်ဘရိတ်နင်းခြင်းကို သတိပေးသည့်အတောအတွင်း အန္တရာယ်မီးကို အလိုအလျောက်လင်းစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ (Double Cab & Extra Cab)
Big, strong and stylish, the Hilux sets the standards foranew generation. in both and leisure, its advances capabilities and features will help to expand your lifestyle.
HILUX REVO တွင် SRS ယာဉ်မောင်းလေအိတ်၊ SRS အရှေ့ဘက်စီးနင်းသူလေအိတ်၊ SRS ဒူးလေအိတ် (ယာဉ်မောင်း၏ထိုင်ခုံ) (All grades)၊
Toyota ၏ ဆန်းသစ်သော GOA ဒီဇိုင်းကို အခြေခံကာ HILUX REVO ၏ ကိုယ်ထည်ကို ခိုင်ခန့်မာကျောအောင် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ယာဉ်တိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်သည့်အခါ ခရီးသည်များအား ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ခံနိုင်ရည်စွမ်းအား မြင့်မားသည့် သံမဏိကို
CRS top tether anchor:
အကူအညီများသည် ထောင့်ချိုးကိုကွေ့ရာတွင် ဦးတည်ချက်ကို ထိန်းထားနိုင်စေရန်အတွက် ဘီးတစ်ဘီးချင်းစီထံသို့ အင်ဂျင်စွမ်းအင်နှင့် ဘရိတ်နင်းသည့်အားတို့ကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိခြင်း၊ ကျဉ်းမြောင်းသည့်ကွေ့ သို့မဟုတ် စိုနေသည့်မျက်နှာပြင်၌ပင် လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှိနေစေခြင်းဖြင့် မော်တော်ယာဉ်မှာ ၎င်း၏ဦးတည်ရာကို ထိန်းထားကြောင်း သေချာစေပါသည်။ (Double Cab & Extra Cab)
LED ရှေ့မီးကြီးများ (G Grade) နှင့် LED နှင်းခွဲမီးများ (G Grade Premium)သည် မြင်နိုင်စွမ်းအား ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။